Ny sidina voalohan'ny Qatar Airways dia tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina Alexander The Great Airport
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny sidina voalohan'ny Qatar Airways dia tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina Alexander The Great Airport
Jolay 17, 2017
Ny sidina Qatar Airways voalohany tsy an-kiato avy any Doha mankany Skopje dia nidina androany tao Alexander the Great Airport. Ny zotra vaovao mankany amin'ny renivohitry ny Repoblikan'i Makedonia dia hatolotra inefatra isan-kerinandro amin'ny fiaramanidina Airbus A320, misy seza 12 ao amin'ny Class Business ary seza 120 ao amin'ny Class Economy.
Skopje dia manome vavahady mankamin'ny firenena misy toerana mahatalanjona, ao anatin'izany ny farihy mahafinaritra, tendrombohitra ary tanàna manan-tantara mahafinaritra. Ireo mpitsidika an'i Skopje dia afaka mahita ireo mpiara-monina amin'ny vanimpotoana Ottoman, miantsena amin'ny bazary taloha, na mitsidika ny tanànan'ny tanànan'i Orchid sy ny tranobeny mahafinaritra. Ireo mpandeha izay maniry hiaina ny fifangaroana ara-kolontsaina sy cosmopolitan tokana ao an-tanàna dia afaka mamandrika ny tapakilan'izy ireo amin'ny tranokala Qatar Airways na rindranasa finday vao noforonina.
Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra ao Qatar Airways, Andriamatoa Ehab Amin, izay nandeha an-tsambo tamin'ny sidina voalohany niaraka tamin'ny masoivohon'i Masedoniana tany Qatar, Ramatoa Vukica Krtolica Popovska, no nitsena azy ny minisitry ny fitaterana sy ny serasera ao Makedonia, Andriamatoa Goran Sugareski; Tale jeneralin'ny seranam-piaramanidina TAV Makedonia, Andriamatoa Alp Er Tunga Ersoy; ary masoivohon'i Qatari any Skopje, Atoa Hassan Bin Abdullah Zaid Al Mahmoud, ao amin'ny Alexander the Great Airport, Skopje. Notolorana sira sy mofo ireo solontena VIP avy any Doha, fandraisana arahim-paharazana Makedoniana, rehefa nidina ny fiaramanidina izy ireo.
Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker dia nilaza fa: "Ity fahavaratra ity dia be atao amin'ny Qatar Airways, satria manohy ny fanitarana an'i Eropa Atsinanana izahay. Ny serivisinay vaovao inefatra isan-kerinandro any Skopje dia fanampiana efa nandrasana fatratra tamin'ny sarintany maneran-tany, izay hahafahanay mampifandray ireo mpandeha amin'ny asa aman-draharaha sy any amin'ny Repoblikan'i Makedonia. Manantena ny fandraisana ireo mpandeha an-tsambo izahay ho any amin'ity tanàna mahasarika ity. ”
Ny tale jeneralin'ny seranam-piaramanidina TAV Makedonia, Andriamatoa Alp Er Tunga Ersoy, dia nilaza hoe: “Fahafinaretana lehibe ho anay ny mandray ny sidina Doha-Skopje voalohany sy ny fidiran'ny Qatar Airways mankany amin'ny tsenan'i Masedoniana, ho iray amin'ireo fiaramanidina ankafiziko indrindra marika manerantany. Doha dia ho toerana vaovao tena manintona ireo olom-pirenena Makedoniana, na amin'ny fialamboly na amin'ny asa aman-draharaha, mampifandray azy ireo amin'ny tanjona 150 fanampiny manerantany. ”
I Makedonia dia ivon'ny indostrian'ny fanodinana vy, ny simika, ny hazo, ny lamba, ny hoditra ary ny fanontam-pirinty, ary izy dia sokajiana ho iray amin'ireo toekarena Top 10 eran'izao tontolo izao manao asa fandraharahana. Ny fanombohana ny zotram-pitaterana an'habakabaka vaovao nahazo ny loka ho any Skopje dia hanampy ireo mpandraharaha Makedoniana hifandray amin'ireo mpiaramiombon'antoka aminy any amin'ny toerana 150 mahery eran'izao tontolo izao.
Ho fanampin'izany, ny fanombohana ny serivisy fitaterana entana an-habakabaka any Skopje avy amin'ny Qatar Airways Cargo dia hampiroborobo ny fitomboan'ny varotra amin'ny rivotra any amin'ny Repoblikan'i Makedonia amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny firenena amin'ireo mpanafatra entana any avaratra atsinanan'i Azia amin'ny alàlan'ny foibem-piarahamonina Doha misy ny zotram-piaramanidina. Ny Ivotoerana Fanaraha-maso ny toetr'andro izay vao natombok'ilay mpitatitra entana dia manatsara ny vahaolana tsy misy tohiny ary manome serivisy fitaterana tonga lafatra hanohanana ny fanondranana voankazo sy vokatra vaovao avy any Skopje mankany amin'ny toerana maro manerana ny tambajotran'izao tontolo izao.
Ny serivisy voalohany ataon'ny zotram-piaramanidina ho an'ny Repoblikan'i Makedonia dia hanome ny mpandeha fialam-boly mora kokoa ihany koa mankany Aostralia, izay misy 200,000 XNUMX aostraliana Makedoniana mipetraka.
Qatar Airways dia manafaingana ny fanitarana azy any Eropa Atsinanana, miaraka amin'ny serivisy ho an'i Prague, Czech Republic ary Kyiv, Okraina manomboka amin'ny faran'ny volana aogositra.
Qatar Airways, mpitatitra nasionalin'ny State of Qatar, dia iray amin'ireo zotram-piaramanidina mitombo haingana indrindra miasa amin'ny iray amin'ireo fiaramanidina tanora indrindra eran'izao tontolo izao. Ao anatin'ny faha-20 taonan'ny asany, Qatar Airways dia manana fiaramanidina maoderina misy fiaramanidina 200 manidina any amin'ny toerana misy ny orinasa sy fialamboly manerana ny kaontinanta enina.
Doha - Skopje sidina sidina:
Alatsinainy, alarobia, zoma ary alahady
Doha (DOH) mankany Skopje (SKP) QR305 dia miainga: 06:50 tonga: 11:15
Skopje (SKP) mankany Doha (DOH) mankany QR306 miainga: 12:15 tonga: 18:15
Gazpromneft-Aero sy SOCAR Torkia Petrol Enerji dia nanao sonia ny fifanarahana
Ny tahiry Batik Air izao ao Saber